Ingqekembe yeVeki: iChiliz (CHZ) | Klever ezezimali
Ingqekembe yeVeki: Chiliz (CHZ)
I-Chiliz yimali ye-crypto esetyenziselwa kuphela imidlalo kunye nokuzonwabisa yifemu yaseMalta yaseFinTech.
Yintoni iChiliz (CHZ)?
I-Chiliz yimali ye-crypto esetyenziselwa kuphela imidlalo kunye nokuzonwabisa yifemu yaseMalta yaseFinTech. Isebenza i-Socios, i-blockchain-based based sports entertainment platform evumela abasebenzisi ukuba bathathe inxaxheba kulawulo lweempawu zabo zezemidlalo ezizithandayo. Iithokheni ezininzi zabalandeli nguSocios.com ngumzekelo waloo nto. Amava ophawu lwabalandeli abonelela ngendlela yokunxibelelana nabalandeli kunye nokuvula imithombo yengeniso yeeklabhu zemidlalo kunye nemibutho.
Itekhnoloji yeChiliz ivumela imibutho yezemidlalo ukuba ikhuphe inani elilinganiselweyo leethokheni zabalandeli kwi-FTO yokuqala (umnikelo wophawu lwabalandeli). I-Chiliz ichaza ixabiso lokuvula kunye ne-market cap ye-market diluted ngokupheleleyo, kwaye inikezelwa ngokuza kuqala, isiseko sokuqala. Ithokheni ye-CHZ yomthonyama isetyenziselwa ukuthenga iithokheni zabalandeli kwaye isetyenziswa njengemali yangaphakathi yeqonga. Ngeenkontileka ezihlakaniphile, abalandeli banokuvota kwi-platform ye-Socios usebenzisa amathokheni abo abalandeli. Iiklabhu zithatha isigqibo malunga nokuba abalandeli banefuthe elingakanani. Oku kubandakanya yonke into ukusuka kuyilo lwejezi entsha ukuya ekumiseleni imidlalo yamaqela kwimidlalo yemiboniso.
Abaseki beChiliz: Ngoobani?
I-CEO yayo yangoku, u-Alexandre Dreyfus, wasungula i-Chiliz kwi-2001. U-Dreyfus uye waseka kwaye wakhulisa iinkampani ezisekelwe kwiwebhu ngaphezu kweminyaka eyi-20. Ngaphambi kokuseka uChiliz, wenza iWebcity, isikhokelo sokuhamba esisebenzisanayo, iWinamax, kunye neChilipoker, zombini iiprojekthi zepoker kwi-Intanethi. Njengenxalenye yeFan Tokens, injongo yakhe “kukusebenza nzima kunangaphambili kuthumo lwethu lokuseka ngokupheleleyo iiFan Tokens njengesona sixhobo sokubandakanya abalandeli nanjengomenzi wengeniso entsha onamandla kushishino lwezemidlalo.” Iiklabhu ezininzi, kubandakanywa nezincinci, zibhalisele iithokheni zabalandeli ngenxa yolu lwando olunobundlobongela.
Chiliz: Yintoni Eyenza Yahluke?
Ukusebenzisa iteknoloji yeChiliz, yonke imibutho yezemidlalo inokubonelela okulinganiselweyo kweethokheni zefeni ezinikezelwa kwi-FTO yokuqala (umnikelo we-fan token). I-Chiliz ichaza kwangaphambili ixabiso lokuvula kunye ne-capitalization yemarike ehlanjululwe ngokupheleleyo yala mathokheni, ewanikezela ngokuza kuqala, isiseko sokuqala. Njengemali yangaphakathi yeqonga, ithokheni ye-CHZ yendabuko isetyenziselwa ukuthenga iithokheni zefeni. Ukusebenzisa izivumelwano ezihlakaniphile, abalandeli banokuvotela emva koko kwi-platform ye-Socios kunye namathokheni abo abalandeli. Iiklabhu zithatha isigqibo malunga nokuba abalandeli banefuthe elingakanani. Iintlobo ngeentlobo zezigqibo zenziwe, ukusuka ekukhetheni uyilo olutsha lwejezi ukuya ekugqibeni ngokudibana kweqela kwimidlalo yemiboniso.
Nge-Chiliz, abalandeli bezemidlalo abaqhelekileyo banokuthatha inxaxheba ngokuthe ngqo kwinkqubo yokwenza izigqibo kwiiklabhu kunye nemibutho. Ngekhampasi yaseChiliz Blockchain, i-cryptocurrency incubator yabucala ekhawulezisa ukwamkelwa kwe-blockchain kulo lonke elase-Asiya naseYurophu njengomzekelo omnye, inkampani ngokuqhubekayo isenza iindlela ezintsha zokuba abalandeli babandakanyeke. Ekupheleni kuka-2021, inkampani ilindele ukuba namaqela angama-80-100 njengenxalenye yenethiwekhi yayo, esele i-10% kuphela yamandla ayo.
Iinkozo zeChiliz (CHZ) ezijikelezayo: Zingaphi?
Ukususela ngo-Oktobha 2018, ukunikezelwa kwe-CHZ iyonke yayiyi-8.8 yeebhiliyoni, isasazwe kubaxhasi bokuqala ngaphandle kweentengiso zoluntu ngaphaya kwezinto eziye zafumaneka ngokutshintshiselana.
Nangona i-CHZ iqaliswe njengophawu lwe-ERC-20, kamva yenzelwe ukuba ibe yi-BEP-2 ehambelanayo, ithatha inzuzo yendima ye-Binance Launchpool ekukhupheni amathokheni e-fan njengenxalenye yentsebenziswano yeqhinga. I-CHZ iyafumaneka nakwi-Tron blockchain njenge-TRC-20 ithokheni.
Ikhuselwe njani iNethiwekhi yeChiliz?
I-CHZ inokufumaneka kwiibhloko ezininzi, kuquka i-Ethereum, i-Binance Smart Chain, kunye ne-Tron. Abalandeli bavota kuphela kwii-polls eziphicothiweyo esidlangalaleni kunye neendlela zayo zokulawula isihlwele kwicala layo le-Socios. Enkosi kwindlela yokulawula isihlwele, abalandeli bakwindawo ekhuselekileyo kwaye iithokheni zabo zenziwe kwi-Socios sidechain. I-sidechain isebenzisa imvumelwano yobungqina begunya. Uninzi lobungqina begunya busetyenziswa yimibutho yabucala ene-blockchains evaliweyo kunye nabasebenzisi kuphela ngaphakathi kwe-ecosystems yabo. Le ndlela yemvumelwano yahlulahlulwa kancinane kunezinye iindlela, kodwa inyuke kakhulu kwaye ikhuselekile, iyenza ibe lolona khetho lufanelekileyo lwekhonkco elisecaleni. Ithokheni ye-CHZ yaphicothwa yi-Certik.
Ungathenga phi iChiliz (CHZ)?
Ewe, oko kucacile, Klever yiprojekti kunye norhwebo Klever Shintsha.
Akukho kalo 1 Iivoti: 1
Umphathi wemidiya yoluntu Landela kuTwitter @warrencmanuel